SEO PowerSuite: व्यस्त साइट मालिकहरूको परिणाम प्राप्त गर्न Get द्रुत तरिकाहरू Martech Zone
SEO PowerSuite: व्यस्त साइट मालिकहरूको परिणाम प्राप्त गर्न Quick द्रुत तरिकाहरू
शनिबार, जून १,, २०१। सोमबार, अक्टोबर 18, 2021 अलेह Barysevich
डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंगको एक पक्ष हो जुन तपाईं सजिलै बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न - र यसको मूलमा एसईओ छ। तपाइँ सायद एक राम्रो एसईओ रणनीति तपाइँको ब्रान्ड मा हुन सक्छ प्रभाव को बारे मा सचेत हुनुहुन्छ, तर एक मार्केटर वा साइट मालिक को रूप मा, तपाइँको फोकस प्राय अन्यत्र हुन्छ, र एसईओ एक लगातार प्राथमिकता बनाउन गाह्रो हुन सक्छ। समाधान भनेको डिजिटल मार्केटि software सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु हो जुन लचिलो, क्षमता-धनी, र अत्यधिक प्रभावी छ।
प्रविष्ट गर्नुहोस् SEO PowerSuite - उपकरणहरूको पूर्ण भण्डार तपाईंको SEO अधिकतम बनाउन डिजाइन गरिएको। यस पोष्टमा, हामी तपाइँले आफ्नो ब्रान्डको SEO लाई बढावा दिन SEO PowerSuite प्रयोग गर्न सक्ने पाँच तरिकाहरू प्रकट गर्नेछौं।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई फेला पार्न योग्य हुनुहुन्छ
यदि तपाईं आफ्नो साइटलाई अनुक्रमित र प्रभावी ढ ranked्गले क्रमबद्ध गर्न चाहानुहुन्छ भने, गुगललाई तपाईंको साइट क्रल गर्न र यसको सामग्री पत्ता लगाउन यो सम्भव भएसम्म महत्त्वपूर्ण बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यो दिमागमा साथ, साइट संरचना अनुक्रमणिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एकदम सरलताका साथ, तार्किक संरचनाको साथ वेबसाईटहरू खोजी ईन्जिनहरूका लागि क्रल र श्रेणीकरण गर्न सजिलो हुन्छ।
SEO PowerSuite प्रयोग गरेर, तपाईंले आफ्नो साइटको संरचनाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। बिभिन्न कारकहरू खेलमा आउँछन् - उदाहरणका लागि, मुख्य पृष्ठहरू गृह पृष्ठबाट पहुँचयोग्य हुनुपर्छ, र ब्लग पोष्टहरू प्रासंगिक रूपमा सान्दर्भिक हुँदा तिनीहरूको बीचमा लिङ्क हुनुपर्छ। तपाईंले त्यस्ता वस्तुहरू जाँच गर्न SEO PowerSuite को वेबसाइट अडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
केवल वेबसाईट अडिटर उपकरणमा जानुहोस्, र मा क्लिक गर्नुहोस् पृष्ठ खण्ड। त्यसो भए, अवलोकन गर्नुहोस् पृष्ठमा आन्तरिक लिंकहरू तपाइँको साइटमा कुन पृष्ठहरूमा आन्तरिक लि .्कहरू नभएको भनेर पहिचान गर्न स्तम्भ छ।
यसले अनिवार्य रूपमा तपाईंलाई पोष्ट र पृष्ठहरूको कार्यवाही सूची प्रदान गर्दछ जसको लागि तपाईंले तपाईंको साइटको अन्य क्षेत्रहरूमा लिंक गर्न उपायहरू फेला पार्न आवश्यक छ।
तपाइँको महत्वपूर्ण वेब पृष्ठहरू द्रुत रूपमा लोड भयो भनेर जाँच गर्नुहोस्
वेबसाइट गति दुई कारणका लागि स्तर निर्धारण मा ठूलो प्रभाव छ:
साइट गति रैंकिंग कारक हो, जसको अर्थ धीमा वेबसाइटहरू सामान्यतया कम तर्दछ।
तपाईंको साइटको गतिले बाउन्स रेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूले प्रयोगकर्ता अनुभव संकेतहरूमा महत्त्वको एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता राख्दछन्। त्यस्तै एउटा संकेत बाउन्स रेट हो, जुन नाटकीय रूपमा साइट गतिले असर गर्न सक्छ - अधिकांश व्यक्ति केवल केहि सेकेन्ड (अधिकमा) साइट उछाल भन्दा पहिले लोड गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्नेछन्।
वेबसाइट अडिटर प्रयोग गरेर, तपाइँ पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको वेबसाइटमा पृष्ठहरू बिस्तारै लोड हुँदैछ। भ्रमण गर्नुहोस् पृष्ठ अडिट वेबसाईट अडिटर उपकरणको मोड्युल, र पृष्ठ गति सेक्सन जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईंको पृष्ठहरूले गुगलको गति परीक्षणहरू पार गर्दछ भने:
एकचोटि तपाईंले कुन पृष्ठहरू बिस्तारै लोड हुन्छन् भनेर पहिचान गरेपछि, तपाईं समस्याहरू सुधार गर्न कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ।
लिंक पेनाल्टी जोखिम जाँच गर्नुहोस्
कम गुणस्तरको लिंकले तपाईंको साइटलाई गुगल दण्डको जोखिममा राख्न सक्छ, जुन एसईओको सर्तमा, तपाईंको सबैभन्दा खराब सपना हो। यदि तपाईं गुगलबाट जरिवानाबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले हानिकारक लिंकहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनुपर्दछ र तिनीहरूलाई बेअसर गर्न कदमहरू चाल्नु पर्छ।
संग SEO PowerSuite को SEO SpyGlass, तपाईं स्वचालित रूपमा तपाईंको ब्याकलिंक प्रोफाइलमा हानिकारक लिंकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र गुगलको लिंक दण्डहरू रोक्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ सबै गर्न को लागी SEO SpyGlass उपकरण मा जानुहोस् र तपाइँको साइट को डोमेन प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि, लिङ्क पेनाल्टी ट्याबमा जानुहोस् र ब्याकलिङ्क खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन बायाँ-हातमा फेला परेको छ। त्यहाँ, तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण डोमेनको लागि 'दण्ड जोखिम' सहित महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको अधिकतामा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तलको लागि द्रुत परीक्षण छ Martech Zone। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ कुनै पनि पेनाल्टी जोखिम हुन सक्छ, राम्रो भयो!
सबै भन्दा उत्तम, तपाईं केवल एक क्लिकमा तपाईंको लिंकहरूको लागि दण्ड जोखिम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, यो व्यक्तिगत लि or्क वा ब्याकलिks्कहरूको समूहको लागि हो, तपाईले आफ्नो पेनाल्टी जोखिमलाई बटनको स्पर्शमा देख्न सक्नुहुन्छ।
एक मोबाइल मैत्री परीक्षण चलाउनुहोस्
मोबाइल खोजीहरूले डेस्कटप खोजीहरूको स match्ख्या मिल्दो क्रममा मोबाइल मित्रता अब गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूको लागि एक सानो स्तरको कारक भएको छ। अर्को शब्दहरु मा, यदि तपाइँको साइट को लागी मोबाइल को लागी अनुकूलित छैन, यो नकारात्मक तपाइँको रैंकिंग को लागी असर पार्न सक्छ (प्रयोगकर्ता अनुभव को उल्लेख छैन)।
तपाईं वेबसाईट अडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको वेबसाइटमा मोबाईल-मैत्री परीक्षण गर्न, जाँच गर्न कि यसले गुगलका मानकहरू पार गर्दछ। यदि तपाइँको साइट परीक्षा पास गर्दैन भने, तपाइँ कसरी तपाइँको साइट अधिक मोबाइल अनुकूलित बनाउन को लागी सुझाव प्राप्त गर्नेछ - उदाहरण को लागी, पाठक तपाइँको पृष्ठ को सामग्री पढ्न को लागी जुम इन वा तिनीहरूको मोबाइल उपकरण मा स्क्रोल गर्नु हुँदैन।
जानुहोस् साइट अडिट तपाईंको साइट जाँच गर्नका लागि वेबसाइट अडिटर उपकरणको सेक्सन।
यदि तपाइँको साइटले अनुकूल स्कोर गर्दैन भने, उत्तम सम्भावित समाधान तपाइँको वेबसाइटलाई उत्तरदायी हुनको लागि पुन: डिजाइन गर्नु हो (यदि यो पहिले नै छैन)। डिजाइन मा लगानी-विशेष गरी मोबाइल को अनुकूल डिजाइन-एसईओ परिणाम मा लाभांश तिर्न सक्छ।
साइट अडिट क्यारी गर्नुहोस्
तपाईको वेबसाइटमा यस्तो समस्याहरू हुनसक्छन् कि तपाई सजिलै चिन्नुहुन्न, वा आफैमा निदान गर्न समय छैन। यसले तपाईंको साइटको अधिकार र रैंकिंगलाई असर गर्न सक्छ। SEO PowerSuite को साथ, तपाईंसँग उपकरणहरूमा पहुँच छ, जस्तै साइट अडिट उपकरण, जसले तपाईंको साइटको साथ स्वचालित रूपमा कुनै पनि मुख्य मुद्दाहरू सूचक गर्न सक्छ।
पूर्ण साइट अडिट गर्नको लागि, वेबसाइट अडिटर एप खोल्नुहोस्, र प्रयोग गरेर आफ्नो वेबसाइटको स्क्यान सुरु गर्नुहोस्। साइट अडिट उपकरण:
यस उपकरणले स्वचालित रूपमा कुनै प्राविधिक मुद्दाहरू पत्ता लगाउँदछ जुन तपाईंको श्रेणीकरण कम गर्न सक्दछ, तपाईंलाई कसरी समस्याहरू ठीक गर्ने सिकाउँदछ, र तपाईंलाई कुनै पनि पृष्ठमा समस्याहरूको बारेमा जान्न दिन्छ। यो धेरै शक्तिशाली सामान हो।
SEO ले तपाइँको ब्रान्डमा यति ठूलो प्रभाव पार्दछ कि यसलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो एसईओ अभियानलाई प्राथमिकता दिन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, एसईओ पावरसुटको प्रभावी उपकरणहरूको शस्त्रागार जाँच गर्नुहोस्।
तिनिहरु SEO को प्रक्रिया सुचारु गर्दछ, तपाईको साइटलाई केहि मुद्दाहरूको पहिचान गर्न तपाईको लागि यो सजिलो र छिटो बनाउँदछ, र अन्तत: तपाइँलाई तपाइँको साइटको रैंकिंग अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ।
SEO PowerSuite प्रयोग गरेर, तपाईं सक्नुहुन्छ
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट छ अनुकूलित संरचित
तपाइँको वेबसाइट जाँच गर्नुहोस् चाँडै लोड हुन्छ
तपाईंको साइटको जाँच गर्नुहोस् ब्याकलिink्क दण्ड जोखिम
चलाउनुहोस् मोबाइल मैत्री परीक्षण
क्यारी ए पूर्ण साइट अडिट
वास्तविकतामा हामीले यस लेखमा हिमशिलाको टुप्पो मात्र छोयौं, तर माथिको तपाईंको साथ जानको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ! तिमी सक्छौ SEO पावरसुइट नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट मा।
SEO PowerSuite नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्!
प्रकटीकरण: Martech Zone यसको प्रयोग गरिरहेको छ एसईओ Powersuite यस लेखमा सम्बद्ध लिंक।
टैग: ब्याकलिंक अडिटब्याकलिink्क दण्ड जोखिमलिंक जोखिममोबाइल मैत्रीमोबाइल परीक्षणशक्तिसाइटखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओएसईओ अभियानएसईओ পাওয়ারसुइटएसईओ संरचनासाइट अडिटवेबसाइट अडिटरवेबसाइटको गति
एलेह बर्सेविच एसईओ पावरसुटको पछाडि कम्पनीहरूमा संस्थापक र मुख्य बजार अधिकारी छन्, पूर्ण चक्र एसईओ अभियानहरूको लागि पेशेवर सफ्टवेयर, र अवरियो, एक सामाजिक मिडिया, र वेब अनुगमन उपकरण। उहाँ एक अनुभवी एसईओ विशेषज्ञ र एसएमएक्स र ब्राइटनएसईओ सहित प्रमुख उद्योग सम्मेलनहरूमा वक्ता हुनुहुन्छ।
कसरी तपाइँको युट्यूब च्यानल सेटअप र यसलाई क्रश गर्ने!
नयाँ प्रभावमा सर्दा कसरी प्रभाव पार्ने प्रभावलाई कम गर्न
जुन 26, 2016 मा 11: 25 PM
पहिलो अनुच्छेद साँच्चै घर हिट। व्यवसाय मालिकहरू व्यवसाय सञ्चालनमा व्यस्त छन् र बजारकर्ताहरू त्यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनमा व्यस्त छन्। तिनीहरू सबैसँग एसईओलाई प्राथमिकता नदिईकन बारम्बार उपस्थित हुन जरुरी मामिलाहरू छन्। यसमा फोकस गर्नु साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ र तपाईंले साझा गर्नुभएका यी तरिकाहरू तिनीहरूका लागि साँच्चै उपयोगी छन् जसले एसईओका लागि थोरै समय छुट्याएका छन् तर अझै पनि उनीहरूको किवर्डहरू प्रीमियम श्रेणीमा चाहन्छन्।
लोडिङ समय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा जोड दिनको लागि, जब मानिसहरूले लिङ्क क्लिक गर्छन्, तिनीहरूले आफ्नो ब्राउजरमा पछाडिको बटन क्लिक गर्नु अघि र अर्को खोज परिणामको साथ आफ्नो भाग्य प्रयास गर्नु अघि पृष्ठ ठीकसँग प्रदर्शित हुनको लागि लगभग पाँच सेकेन्ड पर्खनेछन्! आफ्नो साइटलाई सकेसम्म सरल र फ्ल्यास-रहित राख्नुहोस्!